Mareykanka: Xamaami Weli Waan Doon Dooneynaa
Maraykanku waxay sheegtay in loo haysto Xamaami eedo la xidhidha argagixisada, sidaa daraadeedna uu weli doon doonayo. Hadalkan ayaa ka dmabeeyey waraysi uu malaintii Talaadada ee toddobaadkan siiyey idaacadda VOA.
Warka kooban ee ay dowladda Mareykanka kaga jawaabtay hadalka Xamaami ayaa lagu yiri Cumar Shafik Xammami, waa muwaadin u dhashay Mareykanka oo Somalia tagay isagoo ay ka go’oneyd inuu ku biiro ururka Al-shabab.
Waxaa uu ku eedeysanyahay inuu gacan weyn ka siiyay Al-shabab, oo uu Mareykanka u aqoonsanyahay argagixiso, howlgaladii mulatary iyo ololiha dacaayadaha kooxda ee dhinaca warbaahinta.
29kii Bishii July sanadkii 2011kii, ayey dowladdda Mareykanka ku dartay Xamaami liiska dadka Marykanka u dhashay ee loo doon doonayo falalka argagixis, ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan SDN)
Qodobka sharci ee loo cuskanyo Liiskaasi ee tirsigiisu yahay -13536- ayaa faraya in laga mamnuuco oo laga xanibo hantida, shaqsiyaadka u dhashay mareykanka, ee macaamil maaliyadeed la sameeya, si toos ah iyo si aan toos aheynba – shaqsiyaadka ama hay’adaha falalkooda ay si toos ah halis ugu hayaan nabadda, iyo xasiloonida Somalia.
Mr. Xammami waxaa lagu daray liiskaasi shaqsiyaadka loo aqoonsaday inay halis ku yihiin nabadda Somalia, sida ku xussan qodob sharciyeedka mareykanka ee tirsigiisuyahay – 13536- iyo inuu sidoo kale taageeray ururka Al-shabab, oo sida ku xussan xeerka numbarkiisu yahay 13226- Mareykanku uu u aqoonsanyahay urur Argagixiso oo shisheeye.
Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Mareykanka barnaamijkeeda – lacagta kubixiya soo qabashada dadka loo doo doonayo cadaaladda – ee marka la soo gaabiyo la yirahdo (RFJ) ayaa lacag gaareysa 5 malyuun oo dollar dul dhigay madaxa Xamaami, taasoo abaal marin ahaan loo siinayo cidii soo sheegta war horseeda in la soo qabto Cumar Xamaami.
Warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu xussay aragtida safaaradaha mareykanka ee ku howlan isku duwidda wararka ku aadan soo qabashada ragga xamaami oo kale ah.
Waxaa lagu sheegay warbixintan in Xamaami uu yahay nin xeer beeg maxkamadeed oo Mareykan ah ay eedo ku soo oogeen, sidaa daraadeena mareykanku uu weli daneynayo, helista wararka ku aadan sidii loo soo qaban lahaa.
Warbixitan waxaa gebagabadii lagu yiri,
Wasaaradda Arimaha Dibadda waxey adeeg safaaradeed u fidisaa muwaadiniinta Mareykanka marka ay la soo xiriiraan safaaradahaasi, waa hadii ay xaq u leeyihiin in adeegaasi loo qabto.
Hadii Xamaami uu nala soo xiriiro, waxaan u fidin doonaan caawimaadaas sida uu qabo sharciga mareykanka iyo xeerarka u degsan.